Elinye ixesha ayikwazi zibuyiselwe ukuboleka imali, -ngomtsalane ukudityaniswa kwetyala
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Elinye ixesha ayikwazi zibuyiselwe ukuboleka imali, -ngomtsalane ukudityaniswa kwetyala
Ngaba "ukudityaniswa kwetyala" lidla bubonakala CM kutshanje, kodwa abanye abantu andazi isnt nokuba okanye kukho nayiphi lula.
Le, lo gama inkonzo esiqinisekisayo ukuba banamatyala ezininzi, ukuba zigcinwe ngokuqinileyo ukhumbule ukuba ukusebenzisa njani, nto kukho kwakhona kungenzeka ukuba sibuyele ubomi yokuqala.
Nanga okuqulathwe neempawu ukuze ukudityaniswa kwetyala.
yi ukudityaniswa kwetyala kunye
ityala ukudityaniswa, ezifana ezezimali kunye zebhanki yabathengi, yinkonzo kwinkampani mali leyo ebeka kunye imali lathathwa nababolekisi amaninzi kwinkampani enye.
igqibile ngemali entsha, ngomnye intlawulo, bube lula ukulawula, ukuba ngokwalapha loo mdla, kukho inzuzo okanye Ukunciphisa intlawulo iyonke.
ityala ukudityaniswa kakhulu, yenye indlela ukunceda abantu abangakwaziyo yenziwe intlawulo kwi kumatyala amaninzi ezinjalo.
kunjalo, kunye nabantu akunyanzelekanga ukuba ngandlel 'ithile ingeniso ecacileyo, ukuba ubukhe ubhaliselwe ngokulandelelana kwezinye iinkampani, kukho kwakhona ityala eyayiza kwala ngokutsha kweqonga.
hayi ukuboleka kuphela ezongezelelweyo, oko ingcamango ilungileyo njengoko equlathe ikakhulu buyiselo.
Le nkonzo ngokusisiseko koko yenzelwa kwi kwiibhanki ezinkulu ezinjalo.
, ke, loo nto iye kwiminyaka yakutshanje zenziwa njengoko imveliso entsha kangaka Machikin kunye credit neemanyano kukanina. Nangona
lenzala ngamnye ngaphandle, Nakaniwa, ngokuba kukho kwakhona indawo eliye laba isixa esikhulu kunye nezinga lenzala ngeenzuzo kweembuyekezo wayo, ukuba ucinga ukudityaniswa kwetyala, njengoko uhlolisisa ezinye abathengisi Makhe.
iingenelo ukudityaniswa kwetyala, kukuba zibuthelwe ndawonye umhla intlawulo ukuba omnye yeyona inkulu. Yaye ekupheleni ngalinye
kwenyanga ukuba ahlawule, kwabe, iintsuku 35, kwimeko abolekwe ezahlukeneyo kwinkampani nganye, ukuze abe umhla intlawulo ezahlukeneyo, kungekhona iimpazamo ezimbalwa, ezifana ukukhohlwa ngokungenankathalo.
kwakhona ukwenzela ukuphelisa ukukhathazeka onjalo kwangaphambili ukuze kukhuselwe umhla intlawulo kulo, kuhlelwa unako ukuhlawula uthi ukuba kubhetele ukuba kusetyenziswe ukudityaniswa kwetyala.
Kwakhona kuyenzeka ukuba imali intlawulo lokugqibela lifinyele.
Oku kungenxa yokuba, kwimeko kwezikim ezahlukeneyo intlawulo inkampani nganye, kuba imali inqununu ukuba eyisingela mali esiyintlawulo eyahlukileyo. Ingaba ufuna ukuphelisa le ntlawulo ixesha elifutshane
, kungcono ukukhetha nokuba umntu ukudityaniswa kwetyala lowo ucinga njalo.
ngaphezu kwayo yonke enye into, kukuba akukho mfuneko yokuba ahlawule inzala extra, nina nithi ukuba iinzuzo ezibalulekileyo ngokwemigaqo ukulondoloza.
Oku, kuba abo benza lokuhlawula ityala iphindaphindeke inkampani, ekubeni kunokwenzeka ukoyisa indawo apho iba isixa esikhulu kakhulu imali umdla nje ngenyanga, siya kwenza ukuba isantya ukunyuka zokuhlawula.
Indawo abapasa iimviwo
Ngale ndlela, kukho iintlobo ezininzi zoncedo nenzuzo ukuba abanamatyala ezininzi, kodwa ukudityaniswa kwetyala, akusayi kuba nako ukusebenzisa ukuya nge kuviwo khosi. Kwakhona kuxhomekeke kwi
isicelo kuyo, kodwa khumbula ukuba iya kuba ezibalulekileyo ngokwemigaqo amanqaku, ezifana le ilandelayo badlula ikakhulu uviwo. It uyaboleka inani elipheleleyo in
? kwezinye iinkampani. Ezifana neenkampani
5 okanye ngaphezulu, kwaye amaxesha amaninzi ezibolekisa ngemali, kukho kwakhona umngcipheko wokuba siza ulahlekile. Kwaye
? Kuba kwinkampani nganye ukuboleka bafumana okuboleka enziwa
10 Man, kunokuba kufumana mboleko kwiiyunithi 500,000, kuya kuthiwa ukuza kwakhona kwicala umbono ezahlukeneyo ukuboleka.
? imbali ngengozi lobukho nokungabikho
ubukhulu becala, ukuba akukho kulibaziseka lokuhlawula, ezifana Asinguye Waba non-mali kuya kufuneka ukuyenza.
ngokwakho xa uzihlola ukuba okanye hayi kukho ingozi imbali kukuthi, ingumbono omhle ukuba anikele, yaye ngakumbi iinkcukacha disclosure arhente credit bureau ulwazi lobuqu. Ubude inkonzo
iminyaka yenkonzo kwi
? inkampani kuba kwakhona ngamava inani leentsuku umntu njengelungu lombutho woluntu, oko kuya kubonakala xa inxalenye uzinzo emsebenzini.
wada wathola abaninzi ixesha elifutshane ixesha xa, mhlawumbi isitalato lula kubhetele ukuba kukho ingeniso fixed ngenyanga.
yemalimboleko of ukudityaniswa kwetyala iinkampani ezininzi eziye ibolekwe ukuza kuthi ga ngoku, iya ndawonye kwenye inkampani, ekujongwe ukuba enye intlawulo.
umyinge wenzala kuphantsi xa kuthelekiswa ne-ukuza kuthi ga ngoku, kukho merit loo nzala livunyelwe.
xa isicelo ukudityaniswa kwetyala, ezifana ngokuboleka inombolo kunye yengozi imbali lilonke, kubalulekile ukwazi ukuba kukho ingxaki ulwazi ngetyala.
indlela iimeko enkulu inkampani elungileyo, ukuba akukho ngetyala ukuba uboleke imali, kucacile ukuba apho nam wanikina intloko yakhe nkqo. Kwimbali intlawulo edlulileyo kunye
zakhe, emva kokuthathela ingqalelo iimeko, ezifana ubude benkonzo, Zama ukuba abonisane ukuba ukudityaniswa kwetyala. Ukuba
ezinxulumene / ngoku ukuboleka imali sakho